Waalidiinta oo xakameeya waa qayb aad u muhiim ah oo aad telefoonka. Waalidiinta oo xakameeya waa mid aad u muhiim ah tan iyo markii ay ha aad leedahay si buuxda uga taliso waxa qoreysa, barnaamijyadooda ama xataa content carruurtaada yeelan karaan in ay helaan aad iPhone. Waxay u baahan yihiin in si kastaba ha ahaatee in karti aad telefoon si iyaga u noqon wax ku ool ah. Habeynta xakameynta waalidnimo meel ku lug karaa isagoo sirta ah si ay u badan tahay waa fikrad wanaagsan inaad ka fekerto sirta ah ee ilmahaaga ma uu awoodi doono inuu maleeyo.
Marka aad gacanta ku waalidka aad qotomisay, waxaad yeelan doontaa gacanta waxa caruurta aad isticmaali kartaa adiga ku qalab macruufka ah. Tani waa mid aad u muhiim ah haddii aad ka fiirsan xaqiiqada ah in mararka qaar waxaa jiri kara qaar ka mid ah waxyaabaha ku saabsan telefoonka aan ku haboonayn ee carruurta. Haddii aad u yaabsan sida loo sameeyo gacanta waalidka, halkan waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo u suuragelinayo in xakameynta waalidnimo.
Talaabada Koowaad: Burcad app Settings ee ku saabsan qalabka macruufka. Tubada on General Tab ka dibna Tubada ku saabsan xanibaada.
Tallaabada Labaad: Tubada on sahlo Xadidaada oo ka dibna ku qor in sirta ah ee aad dooratay. Lambarka sirta ah waa in u fududaynay xusuus darteed iyo waqti isku mid ah ku adag tahay carruurta aad u maleynayaa.
Tallaabada Saddexaad: Under Section ogolaan, doortaan barnaamijyadooda ku aadan rabin in qof helitaanka aan sirta ah iyo iyaga dami
Haddii aad rabto in aad ganaaxi karaa habayn dhinacyo dheeraad ah muujinta gacanta waalidka ee sooca ah iyo doorashaada. Jaantus hoose ayaa ku siin aragti cad oo waxa aad u baahan tahay inaad samayso.
Arrimaha caadiga ah ee aad la Waalidiinta oo xakameeya aad iPhone ama iPad la kulmi karaan
Muuqaalada gacanta waalidka ku iPhone iyo iPad waa weyn tan iyo markii ay u oggolaadaan in aad dami YouTube iyo Safari gabi ahaanba. Habkan wuxuu kaa badbaaadin karaa yaryarkiinna aad u sameeyaan qaar ka mid ah kuwa online filimada R loo qiimeeyo ee aad halkii ay ma uu fiirin doono. Ayaa gacanta ku waalidka ayaa sidoo kale laguu ogolaado in aad si looga hortago in caruurta aad ka rakibidda barnaamijyadooda dhameystirto in-app iibsadaan. Waxaa jira qaar ka mid ah dadka aan damiir lahayn oo lagu yaqaano in uu ordo fiisa ama ku lug leh kid-friendly app iibsadaan in soo baxayso ma noqon si kid-saaxiibtinimo ka dib oo dhan.
Sida aan kor ku arkay, sidoo kale waa mid aad u fudud in ay awood kuwaas oo gacanta ku waalidka iyo marka ay tahay afgarasho, waxay u badan tahay in ilmahaagu ma xisaabi doonaa sida loo si fudud gab. Kuwa run ahaantii jira faa'iidooyin wanaagsan ee macruufka xakameynta waalidnimo, laakiin waxay sidoo kale leeyihiin ceebaha ay.
Ayaa gacanta ku waalidka ka maqan feature urur. Tusaale ahaan, idinku rabto in ilmahaagu kaliya ay heli karaan ka-ada yar ee aad iPhone; ay noqon lahayd inta badan ka sahlan haddii aad gelin kara oo dhan Chine ee ilmahaaga la oggol yahay si ay u helaan in folder hal helitaanka fudud. Sidaas, waxaad ka baxsan kartaa ilmaha adakaanayso ka "aaggooda" qalabka iyo dhibaato qaar ka mid ah barnaamijyadooda maalin kasta aad. Inta badan waalidka ayaa carruurtooda tirtirto qaar ka mid ah emails muhiim ah aad baan u jeclaanaynaa urur ka badan.
Dhibaato kale oo aad u niyad-jab leh, kuwaas oo xayiraad waalidka waa in ay dib ugu laaban doonta goobaha default mar kasta oo aad iyaga gab. Tani waxay ka dhigan tahay oo keliya ma aad noqon kartaa xayiraadaha iyo marka aad rabto in aad. Waa in aad mar kale maraan habka oo dhan. Laakiin sida aan soo aragnay, ma ahan wax adag tahay in si awood ilaa Apple soo baxa la ah ama dibadda ku biiro, waxaan noocee ah u leeyihiin in ay ku doodeen khasaaro la.
Apple ah waan ku maqlayaaye
Iyadoo versions cusub ee macruufka, tufaax ayaa ku daray feature cusub loo yaqaan helaan hanuuniyey oo u oggolaan doonaa inaad xirtid qalab aad ee app gaar ah. Tani waxay meesha ka saari dhibaatada ururka waxaannu aragnay ayaannu ka hor. Waa in weyn haddii aad rabto in aad u ogolaato caruurta aad u ciyaaro kulan ay iPad laakiin ma qalad ah tirtirto wixii aad alaabtayda oo muhiim ah. Dabcan wax ku xiga ugu fiican ee ay noqon doontaa in la iibsado ilmahaaga wixii ay u gaar ah oo ka dibna awood xakameynta waalidnimo ay qalab.
Wax alla wixii aad samayn, muhiimadda ay leedahay xakameynta waalidnimo lagu ma carabka ku filan karo. Dhibaatada soo food marka la isticmaalayo nidaamka jira oo dhan yar iyo aad shaqayn karto hareerahooda.
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Huawei si iPhone
> Resource > iPhone > Sida loo Isticmaalo Waalidiinta oo xakameeya iPhone iyo iPad